Ibekwe ngenye indlela eyoguquko | IOL Isolezwe
Ibekwe ngenye indlela eyoguquko
Isolezwe / 29 June 2012, 2:27pm /
INGQUNGQUTHELA yesine kazwelonke yemigomo yeqembu elibusayo ibhabhadise ngo-elethu umgomo ongundabamlonyeni weSecond Transition kodwa yawushintsha igama yathi yiSecond Phase of the Transition.
Kusukela ngoLwesibili ntambama amakhomishini angu-11 abedingida lesi siphakamiso esiqukethwe kumqulu obizwa ngeStrategy and Tactics kuze kube yizolo ntambama lapho amalungu wonke evumelanele ngazwi linye ukuthi ayahambisana nokuqukethwe yilesi siphakamiso kodwa aphikisane nendlela esiqanjwe ngayo kuphela.
Ethulela abezindaba izolo kusihlwa uDkt Jeff Radebe, ngemiphumela yezingxoxo, uthe izithunywa azizange ziphikisane ngokuqukethwe yilesi siphakamiso futhi zikwemukele ukuthi le minyaka engu-18 yombuso wentando yabantu ibimayelana nokugxilisa izingxabo zale nqubo.
“Izithunywa zikwemukele ukuthi kusenezinselelo ezashiywa yinqubo yobandlululo futhi kusekuningi ukungalingani komphakathi, okwezomnotho, ububha busadlangile, ukwentuleka kwamathuba emisebenzi. Ngakho-ke kudingeka imigomo ezokwenza sisukumele phezulu ngokushesha. Obekudingidwa wukuthi lo mgomo ulungiswe indlela oqanjwe ngayo ungabi yiSecond Transition kodwa ubizwe ngeSecond Phase of Transition, nokuchaza ukuthi amalungu akaphikisani kodwa athi akuthiwe yisigaba sesibili sokuqhubeka nalapho sathatha khona kusukela ngo-1994,”kusho uRadebe.
URadebe uthi wonke amakhomishana angu-11 athi lo mqulu yiwona ozoba wumkhombandlela kule minyaka engamashumi amabili kumbe amathathu ezayo.
“Emuva kwale ngqungquthela neyaseMangaung, sizobe sesidweba umqulu wezethembiso zokhetho lwango-2014, sakhe izinhlelo zokwenza lama qhinga asebenze. Abatshalwe kuhulumeni bakhe izinhlelo ezizokwenziwa wuhulumeni kaKhongolose ukuze impilo yabantu iguquke ngokushesha ukuze uma sesibuyekela eminyakeni engamashumi amabili ezayo sizishaye isifuba ngalo mgomo,” kusho uRadebe.
Uthe izinto ezihamba phambili kulo mgomo wukuguqulwa ngokushesha kwesimo somnotho, wukuguqula kobunikazi bomnotho okuthiwa busezandleni zabamhlophe, ukwakha umnotho okuzokwabelwana ngawo wonke umuntu nomnotho ozovumela abantu besifazane ukuba kube ngowabo nabo.
Omunye wabaholi abebeseqhulwini bokubhala nokudidiyela lo mqulu nguMnuz Tony Yengeni, ukhwele wadilika kulabo abebethi lo mgomo uhambisana nehlandla lesibili lokubusa kukaMengameli kaKhongolose, uMnuz Jacob Zuma.
“Kuwukweyisa nje ukumatanisa lesi siphakamiso nehlandla lesibili likaZuma. Lo mqulu awuhlangene nakancane nokukhethwa kwanoma yimuphi umholi futhi awuhlangene nakancane nezindaba zaseMangaung. UZuma akahlangene nakancane nokudidiyelwa kwawo kodwa wumqondo kaKhongolose, wumbono onzulu wombutho ozobe usuthathwa udidiyelwa kahle, uyiswe emagatsheni ombutho aphawule ngawo ngaphambi kokuba uyophasiswa yingqungquthela kazwelonke ngoDisemba,” kusho uYengeni.
Kulindeleke ukuba namuhla wonke amakhomishini abike engqungqutheleni bese iyavalwa nguMengameli Zuma.